मेसीलाई बेच्नैपर्ने कार्यवाहक अध्यक्षको भनाइ, के सम्भव होला नेयमार र मेसीको पुनर्मिलन?
बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसी सम्भवतः अन्तिम सिजन ला लिगाका खेलिरहेका छन्। बार्सिालोनाका कार्यवाहक अध्यक्ष कार्लेस टस्केट्सले मेसीलाई बेच्नैपर्ने अवस्था रहेको बताएसँगै सिजनको अन्त्यबाट मेसीको ला लिगा यात्रा सकिने अनुमान गरिएकाे छ।
केहि समयअघि ला लिगाका अध्यक्षले पनि मेसी ला लिगामा नै रहुन् भन्ने चाहना गरेको तर, उनी नभए पनि ला लिगामा केहि फरक नपर्ने बताएका थिए।
यसो त, यसअघि नै मेसीले क्लब छोड्ने चाहाना व्यक्त गरिसकेका छन्। मेसीले बार्सिलोनाको विकल्पका बारेमा सोचिसकेको बताइएको छ। क्लबका आधिकारीक व्यक्तिहरुले मेसीलाई बेच्न चाहेको कुरा सार्वजनिक हुनु र मेसीले स्वंमले पनि क्लब छोड्ने संकेत गर्नुले उनी लामो समयमा स्पेनमा नरहने सहज आँकलन गर्न सकिन्छ।
फ्रेन्च लिग च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मनका स्टार नेयमार जुनियरले अन्तवार्तामा आफूले फेरी मेसीसँगै खेलेर फुटबलको मज्जा लिन चाहेको बताएका थिए। त्यसकारण अब मेसी र नेयमारको पुनर्मिलन सम्भव होला वा नहोला? यदि सम्भव भए कहाँ? भन्ने चर्चा शुरु भएको छ।
मेसीले बार्सिलोना छोड्न चाहेमा म्यानचेस्टर उनलाई भित्र्याउन तयार रहेको समाचारहरु बाहिरिएका छन्। तर, नेयमार र मेसीको पुनर्मिलन सिटीमा सम्भव नहुने फुटबल विश्लेषक बताउँछन्।
युवा खेलाडीहरुको राम्रो जमात रहेको पीएसजीले मेसीलाई भित्र्याउन हतारो नगर्ने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सिजनको अन्त्यसम्ममा पीएसजीले आँट गरेमा नेयमार र मेसीको पुनर्मिलन पीएसजीमा सम्भव हुनेछ।
वर्तमान अवस्थामा अन्य कुनै पनि क्लब मेसी र नेयमार दुबैलाई अनुबन्ध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। विश्व कीर्तिमानी रकममा बार्सिलोना गएका नेयमार र विश्व फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडी मेसीलाई क्लब भित्र्याउन मोटो रकम खर्चिनु पर्नेछ। तर, काेराेना महामारीका कारण आर्थिक चपेटामा रहेका बेला कुनै पनि क्लब त्यसको लागि तयार हुने छैनन्।
#बार्सिलोना #पीएसजी #ला_लिगा #नेयमार_जुनियर #लियोनल_मेसी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७ २२:३९